Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: tsy ampy fahasahiana | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: tsy ampy fahasahiana
Miseho ankehitriny ny fanenjehana an’Andriamatoa Mbola Rajaonah eny amin’ny Fitsarana. Ny minisiteran’ny Atitany no namoaka ny didy fandraràna ity mpandraharaha ity hivoaka ny nosy. Anton’izany ny maha voarohirohy azy ao anatin’ny fanaovana hetsika sy asa samihafa ahiahiana ho heloka. Azo ifaliana ary azo heverina ho fahavitana dingana ny tsy fisian’izany « tsy maty manota » izany intsony. Lasa ihany anefa ny saina noho ny fifandrifin’ny fotoana isehon’ity fanenjehana ity sy ny tsy fananan’ilay voampanga olona manam-pahefana mpitahy azy intsony.
Tsy vao omaly na afak’omaly na tamin’ny volana ambony na tamin’ny herintaona no nitrangan’ireo fandikan-dalàna iampangàna an’i Mbola Rajaonah ireo. Tsy misy angamba ny atao hoe tsy maty manota, fa mbola misy ny olona tsy azo kasihana ary sahy manota noho ny fananany mpiaro matanjaka. Asa anefa ny ho tohin’ny tantara. Mbola ao anatin’ny fotoan’ny fanadihadiana sy fikarohana ny marina ny fitsarana. Tsy azo lazaina ho efa meloka i Mbola Rajaonah, fa voarohirohy momba ny raharaha maizina izay ahiahiana ho nandraisany anjara, ary hatramin’izao dia mbola tsy misy ny didin’ny mpitsara miampanga azy.
Andanin’izany, nanaovan’ny tompon’andraikitra ambony ao amin’ny fitantanana ny Zandarimaria-pirenena fanambarana, mba ho fanajana ny mangarahara, ny fampidirana am-ponja ireo zandary nanana andraikitra tao anatin’ny sampana voatokana hanadihady isaky ny misy trangana fakana an-keriny (kidnapping), hikaroka ny fahamarinana, hanenjika sy hisambotra ireo olona ahiana ho nandray anjara tamin’izany asa ratsy izany. Tsapa amin’izany vokatra izany ny ezaka ataon’ny tompon’andraikitra amin’ny ady anafoanana ity asa maloto ity. Mbola mipoitra eny an-tsefatsefan-dresaka eny ihany anefa ny ahiahin’ireo tsy mino maty raha tsy avy mandevina. Hoy tokoa ny sasany hoe « sao dia fampandrina adrisa fotsiny ny fampidobohana am-ponja ireo zandary ireo ? »
Ekena fa mety ho meloka tamina fandraisana anjara tamin’ny fanatanterahana izany izy ireo na nitsikombakomba teo am-panatanterahana ny andraikitra nankinina taminy. Efa zava-dehibe ny fisamborana azy ireo. Araky ny fiheveran’ny olona moa dia misy tambajotra maromaro eo amin’
ny fanaovana kidnapping. Vondrona miafina iray ikambanana olona matanjaka noho ny fahefany na ny harenany no mifehy ireo tambajotra ireo. Tsy ny fandravana ny tambajotra fotsiny no antenain’ny mponina fa ny fanapotehana ireo atidoha. Mety ho diso anefa ny fiheveran’ny vahoaka. Aoka ny fitondrana no hanazava mba hampilamina ny sain’ny besinimaro.